Ogaden News Agency (ONA) – Wafdi Maamulka jaaliyada Norway kasocda oo Kormeer Shaqo ku Tagay Magaalada Haslemoen
Wafdi Maamulka jaaliyada Norway kasocda oo Kormeer Shaqo ku Tagay Magaalada Haslemoen
Posted by ONA Admin	/ May 4, 2015
Wafdiga jaaliyada norway oo uu hogaaminayay madaxa abaabulka & arimaha bulshada oo ay weheliyaan madaxa garsoorka, anshaxa,dhaqaalaha & hantidhowrka guud ayaa kormeer Shaqo kusoo kutagay magaalada Haslemoen.
Kormeerkan ayay ujeedkiisu ahayd sidii loo gaarsiin lahaa dhamaan bulshada soomaaliyeed ee norway kunool xaalada dadka soomaalida ogaadeenya kusugan tahay ,loogana haqabtiri lahaa dhibka arxan darada iyo xasuuqa ee gumeysiga tigreegu kuhayo bulshada rayidka ogaadeenya.
Soo dhaweyn diiran oo bulshada Soomaaliyeed ee Haslemoen aanay u Kala hadhin kadib Waxaa la gudo galay shirkii loobalansanaa, shirka Waxaa daadihinayay majaajiliistaha caanka ah ee wadaniga ah Mudane nuur khaliif oo ugu horey sheekha magaalada Haslemoen SH.cabdi ka codsaday in wacdi iyo Quran Ku furo shirka.
Waxaa kadib lagu soo dhaweeyay mikrafoonka madaxa wafdiga Mudane cabdishakuur Xaaji Cali Budul oo ka warbixyay ujeedada Kormeerka wafdiga jaaliyada,Waxaa kale oo si Qoto Dheer uga hadlay halganka isdifaaca iyo qori isudhiibka ee bulshada ogaadeenya Ku jirto & sida ay waajib u tahay in muwaadin walba oo fayow oo dadkiisa iyo dalkiisa jecel waajib ugu tahay in uu hiil & Hooba lagarab istaago.
Waxaa hadalkii qaatay Mudane Tamaan Maxamed oo ka warbixiyay sababta kaliftay in bulshada soomaaliyeed meel ay kunooshahayba badaha kudhamaato, haday noqon lahayd talyaaniga,yemen Ama saxarayaasha aduunka een la Marin, Mudane tamaan ayaa yiri Baahi ay ka cararayaan ma majirto ee waa nabadgelyo la,aan iyo xasuuq ay itoobiya si toos u fulin ama sabab utahay sida darteedna ay muhiim tahay in soomaali iskumeel uga soo jeesato dib uhanashada dhulalkooda heeryada gumeysigana iska qaadaan.
Waxaa hadalkii qaatay Asad sheikh Daahir oo si faahfaahsan uga warbixyay dalka norway shuruucdiisa, sida ugu haboon ee loogu noolaan karo & sida ay jaaliyada ogaadeenya diyaarka ugu tahay in talo & garaba siiso bulshada soomaaliyeed intii karaankeeda ah.
Waxaa hadalkii lagu soo dhaweeyay xasan cabdullahi madaxa hanti dhowrka jaaliyada oo si Qoto Dheer usharaxay haayada socdaalka norway & haayadaha kale, xiriirka jaaliyada soomaalida ogaadeenya iyo dowlada ka dhaxeeya.
Waxaa xusid mudan in isla shirka kasoo qayb Galen Wafdi balaadhan oo uu hogaaminayay Mudane cabdinasir oo kasoo ambabaxay magaalada kongsvinger si ay uga qaybqaataan shirkaa muhiimka ah.
Shirkii dhacay 02.05.2015 ahaana kormeer abaabul & wacyi gelin ayaa wuxuu kusoo dhamaaday guul & ray rayn waxaana wafdigii shirka ka qaybgashay lagu soo sagootiyay si farxadleh.
Midnimo,minted,iskutashi. Allaha Akbar!!
Warfaafinta jaaliyada Norway.